Olee Otú M Pụrụ Hichapụ achọghị Kpọtụrụ si iCloud?
iCloud ndabere Content
1 wepụ iCloud ndabere
Access iCloud ndabere Content
Download iCloud ndabere
Weghachite Photos si iCloud
Weghachi iPhone si iCloud
Weghachite Data si iCloud
Naghachi Ndi ana-akpo si iCloud
Free iCloud ndabere extractor
2 Nyefee iCloud ndabere
iCloud Ndi ana-akpo ka PC
iCloud Photos ka Android
iCloud Ndi ana-akpo ka CSV
Mmekọrịta iCloud na Android
iCloud Ndi ana-akpo ka Android
iCloud kalenda Android
iCloud Ndi ana-akpo ka Outlook
iCloud Music ka Android
3 Weghachi si iCloud ndabere
Mmekọrịta iPhone na iCloud
Weghachi iPad si iCloud
4 iCloud Paswọdu
iCloud uzo Ngwaọrụ
Uzo iCloud mkpọchi maka iPhone
Naghachi iCloud Paswọdu
Uzo iCloud ebighị
Chefuru iCloud Paswọdu
5 Hichapụ iCloud
Hichapụ iCloud ndabere
Wepụ iCloud Akaụntụ
Hichapụ iCloud Photos
Hichapụ iCloud égwu
Hichapụ achọghị Ndi ana-akpo si iCloud
6 iCloud Atụmatụ
Banyere iCloud ndabere
iCloud Iji Atụmatụ
iPad iCloud ndabere Aghụghọ
iTunes vs iCloud ndabere
Ịgbanwe iCloud Akaụntụ
ICloud bụ nnọọ ewu ewu ụbọchị ndị a. Ọ bụ a bara uru ọrụ nke nwere ike ịzọpụta, chebe gị faịlụ na-enyere gị aka na-eso ha na ndị enyi gị. Ọ dị mfe iji iCloud n'ihi na ihe niile Apple ngwaọrụ nwere ya ike n'ime ha os. N'ụzọ dị mwute, e nwere otu nsogbu. Dị ka unu wee kwere, nnukwu na-duplicated kọntaktị. Ọ na-eme ka a ọtụtụ ndị mmadụ kwa ụbọchị. Ọ bụ manụ na-ewe oge. N'ụzọ dị mwute, Apple jụ-enye anyị '' otu click ihichapụ '' atụmatụ. Nke a pụtara na ị ga-mkpa a bit nke oge gị iji ihichapụ duplicated kọntaktị.
Part 1. Hichapụ duplicated kọntaktị site na iCloud ozugbo
Ihe ngwọta kasị mma bụ ka jikota duplicated kọntaktị. Mgbe ị na-mere, iCloud ga mmekọrịta na ngwaọrụ gị na ihe niile duplicates ga-ewepụ. Ọ bụ ihe dị mfe nkuzi na-achọ a nkeji ole na ole nke oge gị. N'ezie, i nwere ike chọọ aka na ihichapụ duplicated kọntaktị. Nke a bụ a odi mfe ụzọ, n'ihi na ị nwere ike ịlele ozi niile, ma ị ga-mkpa a otutu oge.
Nzọụkwụ mbụ bụ na-emeghe Address Book na gị Mac kọmputa. Ị nwere ike ịnweta Address Book ọ bụla na iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ nye Apple ngwaọrụ, ị kwesịrị ịma na Address Book bụ ngwa na nwere ihe nile kọntaktị gị.
Pịa na Kaadị taabụ na-ahọrọ Chọta nke Duplicates. Nke a na nhọrọ kwesịrị ịhụ niile duplicated kọntaktsị na gị Address Book. Ọzọkwa, i kwesịrị ego nke a ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-adịghị duplicated kọntaktị.
Mgbe usoro a na-eme, pịa na jikota bọtịnụ. Nke a ga-jikota niile duplicated kọntaktị. Oge ọzọ mgbe iCloud mmekọrịta, ọ ga-ihichapụ ndị a kọntaktị site na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ị na-okokụre, ị nwere ike ikwugharị usoro otú i jide n'aka na e nwere ndị mba duplicated kọntaktị. Ọkachamara nwere ike ikwu na ị na-ego maka duplicates dịkarịa ala otu ugboro a ọnwa. Nke a ga-ewepụ kwere omume emehie, mgbe ị chọrọ ịkọrọ a faịlụ na ndị enyi gị. Luckily n'ihi unu, nke a bụ ihe mfe ọrụ na ike ga-agwụ agwụ ngwa ngwa.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS - Download ma wepụ iCloud ndabere
Part 2. Olee agbanyụ iCloud kọntaktị
Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ nsogbu na gị iCloud kọntaktị, ị nwere ike atụgharị ha. I nwekwara ike Malitegharịa ekwentị ha, site mbịne ha na mgbe a nkeji ole na ole. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị chọrọ gbanyụọ iCloud kọntaktị, ị ga-eso ndị a. Nke a bụ nnọọ mfe ma ọ na-achọ nanị ole na ole sekọnd.
Gaa ntọala na ịchọta ndị iCloud. Enweta na ya iji nweta n'ime ngwa. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ị ​​nwere ike ihichapụ akaụntụ gị dị ka mma. N'elu, ị ga-ahụ na akaụntụ gị ozi.
Ndi ana-akpo-na-emekarị emi odude ke n'elu ndepụta. Ihe niile ị chọrọ ime bụ Mia obere gburugburu-ekpe ha ga-agbanyụrịrị. Mgbe ị chọrọ ka ha na, dị nnọọ Mia gburugburu aka nri.
I nwekwara ike họrọ ihichapụ kọntaktị site na ngwaọrụ gị. Nke a kwere omume nanị ma ọ bụrụ gị data dị na icloud.com/contacts na na gị na ngwaọrụ. Ị nwere ike ghara weghachi ehichapụ kọntaktị, otú kpacharanụ nnọọ anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ Malitegharịa ekwentị gị na kọntaktị, dị nnọọ ka ha na.
Part 3. iCloud na-agbakwunye azụ / synching achọghị ehichapụ kọntaktị m iPhone
N'ụzọ bụ isi, iCloud bụ nnukwu volt na jikọọ ngwaọrụ gị niile. Ihe niile ị na-azọpụta na ya, ga-abụ dị naanị gị. Ọzọkwa, ị pụrụ weghachi faịlụ na kọntaktị ma ọ bụrụ na ị na-IPhone ma ọ bụ iPad. Otú ọ dị, a otutu ọrụ mere mkpesa banyere iCloud agbakwunye kọntaktị na ha IPhone. Ọbụna mgbe ha ihichapụ kọntaktị site na IPhone, mgbe ibidogharịa kọntaktị, ha ka bụ ndị ebe a. The nkọwa dị mfe. Ị nwere gị kọntaktsị na abụọ ebe. Na gị IPhone na iCloud. Mgbe ị na-ihichapụ ha si dị n'otu ebe, ha re-egosi n'ihi na gị IPhone na iCloud jikọọ. Usoro a na-akpọ mmekọrịta (mmekọrịta). Ihe ngwọta bụ ka ihichapụ kọntaktị site na abụọ, IPhone na iCloud na mmekọrịta ha. Mgbe ị na-eme nke a, na-achọghị kọntaktị ga-kpamkpam ehichapụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ eso ndị a.
Gaa iCloud ntọala, site na ekwentị gị ma ọ Mac ma gbanyụọ mmekọrịta. Nke a bụ nnọọ mfe ime. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ịkwaga slide n'aka-ekpe. Nke a ga-egbochi iCloud si '' Iṅomi '' kọntaktị gị IPhone. Ugbu a, ị nwere ike ihichapụ kọntaktị gị si Mac ma ọ bụ na-ha.
Abanye ka iCloud na-aga ana-akpo. Chọta a kọntaktị ị chọrọ iji wepụ na ihichapụ ya. Ikwugharị a niile na-achọghị kọntaktị. I nwekwara ike iji iwu ma ọ bụ Ctrl (Windows) Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ multiple kọntaktị.
Ihichapụ kọntaktị niile site na gị IPhone. Ọ na-atụ aro ka a ndabere tupu ị malite. Ụzọ kasị mma ime nke a bụ iji iTunes. Ọ dị mfe na e nwere ọtụtụ nke Nkuzi na-esi eme nke a. Cheta na foto gị, ozi, oku na ndị ọzọ faịlụ ga-emetụta mgbe ị ihichapụ kọntaktị gị. Ọzọkwa, ehichapụ kọntaktị-apụghị weghachiri eweghachi.
Ugbu a, na-aga iCloud (System Mmasị-iCloud) na-aga kọntaktị. Pịa otú ị na-atụgharị ha na. Ị ga-ahụ a mmapụta window na-arịọ gị, ị chọrọ ka jikota kọntaktị. Anabata ya ma na-eche a nkeji ole na ole. Mgbe usoro a na-eme, gị IPhone ga jikota kọntaktị na gị iCloud akaụntụ.
Ọ bụrụ na ị na-eso niile nzọụkwụ, ị ga-ejedebe na otu kọntaktsị na IPhone na iCloud. Nke a bụ isi ihe mgbaru ọsọ nke iCloud ọrụ, na nwere otu ọmụma na ngwaọrụ gị niile. Ọ bụrụ na gị na-ehichapụ kọntaktị egosi ọzọ, ke gị IPhone, ikwugharị dum nkuzi. Ọ bụrụ na ha na-egosi ọzọ, ị kwesịrị ị na imelite ma ọ bụ weghachi gị IPhone. Mgbe niile weghachi iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ. Nke a eliminates ize ndụ nke faịlụ na nwere ike ime ka nsogbu ụfọdụ. Na ụfọdụ (obere) ikpe, iOS nwere ụfọdụ chinchi na-eme ka nsogbu a. Na n'akụkụ nke ọzọ, i nwere ike na-agbalị ka ihichapụ gị iCloud akaụntụ na-eme ka onye ọhụrụ. Otú ọ dị, nanị ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ kwuru na nke a na-arụ ọrụ maka ha.
Anọ mfe ụzọ iji nweta iCloud photos
Otú nyefee iCloud faịlụ ka Android
Bụ Apple 5 GB nke Free iCloud Nchekwa n'Ezie a emesapụ Aka na-enye?
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere iCloud ndabere
Olee otú Hichapụ Old iCloud ndabere faịlụ
Olee otú mbupụ iCloud Ndi ana-akpo ka CSV File
> Resource> iCloud> Olee Otú M Pụrụ Hichapụ achọghị Kpọtụrụ si iCloud?